FC ST LC Fiber Optic Connector For FTTH Networks With High Kuisa Loss
FC LC ST Fast Connector nokuda FTTH Networks pamwe High Kuisa Loss
Nokutsanya connector rakagadzirirwa yepamusoro uye yakakwirira kunyatsoshanda kuti installation.
Sechivako crimping chinzvimbo ibhuku rakasiyana design, uye havafaniri gluing, pakuonekwa kana consumables.
Aizoita kushandiswazve, uye dzinokodzera munda installation.
Chakagamuchirwa faibha pre-yakaiswa chivako.
Low kupinza kurasikirwa uye yakakwirira kudzoka kurasikirwa
Kushandisa yakakwirira nemazvo zvedongo ferrule
Yakatsiga kugona uye yakakwirira rakavimbika
Excellent zvokuimba kugona
Majombo zvakasiyana-siyana mavara
Shandisa nokuti wakazaruka FTTH Optical inouraya igume.
Connection ari kuvhara, cabinet, bhokisi chiteshi etc.
Recovery uye kugadzira netsaona akafanana internet vakatongoparadzwa mamiriro ezvinhu.
Lan, Wan, mashoko uye mavhidhiyo hutachiwana.
Construction uye kugadzira muna FTTX kuti chinouraya User
Fiber woisa chawo yemapurisa.
Life Time: Our faibha optic kutsanya connector vane makore anenge 15 hwose, nokuti isu suma yemhando kugadzirwa technolege and100% NEW pakugadzira zvinhu, zvakanaka kudzora faibha optic kutsanya connector kuti unhu.
waya 3.1 × 2.0mm inodonha wire kana 3.0 / 2.0 / 0.9mm waya
bemhapemha dhayamita 250μm
rudzi SM, MM
Kuisa Loss ≤ 0.3dB
Reusable Times > 10 nguva
tembiricha -40 ~ + 85 ° C
The pasuru vachapiwa ndokurongedza maererano mwero ekisipoti zvinodiwa, mutengi satisfication wedu chipfuro.
Label yakadhindwa: Customer Logo kana None muchiso dziripo
Inner chiputiriso: 10pcs / Pe bhokisi
Rokunze chiputiriso: atorwa achaiswa pamu saga, zvakanaka kudzivirira atorwa neguruva uye kunyorova.
internet optic donhwe waya